Fake AirPods: How can you know your Apple AirPods areafraud? ﻿
Fake AirPods: How can you know your Apple AirPods areafraud?
AirPod အတုတစ်ခုကို ဘယ်လို ခွဲခြားသိနိုင်မလဲ?
သင့် AirPod များကို အမြန်ဆန်ဆုံးစစ်ဆေးနိုင်မယ့်နည်းတစ်ခုကတော့ serial number ကို ရှာဖွေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို charging case အဖုံးရဲ့ အောက်ဖက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သလို ညာဖက် earbud ရဲ့ အောက်ဖက်တွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနေရာတွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော serial number ကို check.coverage.apple.com တွင် ထည့်သွင်းကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ AirPod များဟာ အစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပါက သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ Apple warranty status ကို တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်ရဲ့ serial number က အတုဖြစ်နေရင်တော့ သင်တွေ့မြင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီအပြင် AirPod များကို iPhone, iPad သို့မဟုတ် Mac တို့နဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ သင့် device ရဲ့ Bluetooth settings menu ရဲ့ ဘေးတွင် AirPods icon သေးသေးလေးကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်လိုက်ပါက serial and model number များကို တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနည်းနဲ့လည်း စစ်ဆေးကြည့်လိုက်နိုင်ပါတယ်။